“Xataa Qudhaanjada Godkeeda Ku Jirta Iyo Kalluunka Baddaha Ku Jira, Ayaa U Duceeya Qofka Dadka Bara Khayrka” | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Xataa Qudhaanjada Godkeeda Ku Jirta Iyo Kalluunka Baddaha Ku Jira, Ayaa U Duceeya Qofka Dadka Bara Khayrka”
“Dhamaanteen waxa inna wada sugaya kaalin loo baahan yahay in dadku ka wada qeybqaato oo aan lagu hallayn Culimadda oo Keliya, taasoo ah in….”- Sh. Maxamed Cumar Dirir
Hargeysa (Hubaal)- Sheekh Maxamed Sh. Cumar Dirir ayaa cadeeyey in qof kastoo diinta islaamka faafiya helayo ducada Ilaahay iyo dhamaan makhluuqaadkiisa, kuna baraarujiyey bulshada Islaamka inay qaataan kaalintooda sidii ay u faafin lahaayeen Diinta Islaamka.
Khudbad shalay Sheekh Maxamed kaga hadlayey muhiimada faafinta diinta Islaamka ayuu ku bilaabay,
“Dhamaanteen waxa inna wada sugaya kaalin loo baahan yahay inaynu buuxino, oo ah sidii dadka iyo bulshada loo gaadhsiin lahaa Diinta Islaamka, oo dadku ka wada qeybqaato, laakiin, sida wakhtigan taagan aan lagu hallayn keliya Culimadda, laakiin waajibkaasi yahay mid ummada oo dhan wada saaran, qof waliba intuu karayo ka qabto.
“Wacdigu, qof kastoo doonaya inuu ku deydo Nebiga CSW wuu isu-taagayaa, siduu Ilaahay u faray Nebiga CSW aayada macnaheedu ahaa “Waxaan tidhaahdaa, Nebi Maxamedow CSW, jidkaa toosani waa dariiqa aan dadka ugu yeedhayo, anniga iyo intii I raacda,” markaa raacitaanka Nebiga CSW ayey ka mid tahay in qof walba siduu diinta u faafinayey u faafiyo, haduu doonayo ku deyashadiisa.
“Qof walba, rag iyo dumar, qof aqoon badan u leh diinta islaamka iyo qofkii wax yar ka yaqaana waxa looga baahan yahay inuu bulshada kale gaadhsiiyo, intuu garanayo.
“Faa’iidooyin badan ayaa ku jira in qofku faafiyo diinta Islaamka, oo ugu horeyso inuu ku deydo Nebi Maxamed CSW, Raacitaanka nebiga CSW ayey ka mid tahay inaynaan xumaanta isku baahin ee wanaaga isku sheegno.
“Faa’iidooyinka faafinta Diinta Islaamka wax ka mid ah in qofka ugu yeedhay ummada Diinta Islaamka iyo wanaagu, mudan yahay inuu arrimahooda aduunyadana u hogaamiyo, sida Ilaahay aayad macnaheeda inoogu sheegay, “waxaan ka dhigay hogaamiyeyaal markii ay ummada diinta ugu yeedheen’ markaa qofka mudan inuu ummada hogaamiyo waa qofka ugu yeedhay Diinta Islaamka.
“Faa’iidooyinka faafinta Diinta Islaamka iyo waanada wanaagsan oo laga yaabo in qofku kala kulmo culays iyo dhibaato waxay ka mid tahay qeybaha jihaadka, oo mar dadka xunxun waxa lagaga hortagayaa qoriga, iyo ficilka, marka hadalka. Sida Ilaahay markuu ummada la hadlayey aayad macnaheeda ku sheegay, ‘Maaha ummada dhamaantood inay jihaadka u wada baxaan, waa in la helaan dadka qaar u diga, diinta gaadhsiiya, oo dareenkooda nooleeya,’ taasoo caddeyn u ah in faafinta diinta islaamku qeybaha jihaadka ka mid tahay.
“Faafinta diinta islaamka faa’iidooyinkeeda wax aka mid ah innagoo noqonayna dad oofiya ballankii Ilaahay, marka aynu Ilaahay iyo Diintiisa dadka ugu yeedhayno ee saxxayno. Sida Ilaahay aayad inoogu sheegay lagu canaananayo culimadii reer banu-israa’iil kuwii xumaa iyo kuwii dadka wanaaga ugu yeedhi waayey labadaba, ‘Culimadii iyo kuwii aqoonta diinta u lahaa maxay dadka dunuubta ay ku hadlayaan ugu diidi waayeen,” laakiin qofku cudur-daar ayuu helayaa, haduu dadka diinta ugu yeedho, laakiin ay maqli waayaan.
“Nebi Maxamed CSW wuu u duceeyey dadka diinta islaamka gaadhsiiya ummada, khudbadiisii sannadkii tobnaad ee Xajka, “Alle ha nuuro, oo wejigiisa Jannada ha ku iftiimiyo, qofka iga maqlay hadal wanaagsan ee gaadhsiiya dadka aan maqlin,”
“Salliga iyo ducada Ilaahay iyo makhluuqa uu abuuray dhamaantood ayeynu ku helaynaa, haddaynu faafino diinta islaamka, sida Nebi Maxamed CSW xadiis inoogu sheegay macnahiisu ahaa, “Ilaahay, malaa’igtiisa iyo makhluuqaadka oo dhan, xitaa, qudhaanjada godkeeda ku jirta, iyo kaluunka badan ee baddaha ku jira, waxay ku sallinayaan, una ducaynayaan qofka dadka khayrka baraya.” Maaha ka sharka, balaayada, isku dirka qabiilka, baraya, balse qofka kheyrka baraya. Marka ainaad ducadaa hesho waa guul weyn.
“Waxaynu kaga badbaadaynaa nacdasha Alle, haddaynu faafino diinta islaamka, sida Nebigu CSW xadiis inoogu sheegay macnahiisu ahaa, ‘Diinta Ilaahay sheegideeda iyo barashadeeda, waxii ka baxsan way nacdallan yihiin.
“Innaynu Diinta Islaamka Faafino ayaa inooga kheyr badan ubadka iyo aduunyada aynu sida weyn u baadigoobno ee Ilaahay iyo aakhiro inna seejinaya, sida culimmo badan oo Sheekh Nawawi ka mid ahaa ugaga mashquuleen ubad iyo ooriyo, gaadhsiinta diinta islaamka ee ummada. Siduu nebigu CSW xadiis macnahiisa inoogu sheegay, ‘Qof keliya oo halowsanaa inuu sababtaada hanuunka Ilaahay u qaato, gaadhsiintaada, ayaa kaaga wanaagsan geela cascas,”